Ungayigcina kanjani i-bamboo nokhuni phansi - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Ungayigcina kanjani i-bamboo nokhuni phansi
Hlela: UDenny　2019-12-23　Iselula
Gcina umoya omncane
Ukugcina njalo umoya wangaphakathi ungashintshanisa umoya omanzi ngaphakathi nangaphandle. Ikakhulu uma kungekho ophilayo futhi onakekela isikhathi eside, ukufakwa komoya ngaphakathi kubaluleke kakhulu.
Umkhuba ojwayelekile yilokhu: kuvame ukuvula amawindi noma iminyango yegumbi ukuvumela ukuguqulelwa komoya, noma ukusebenzisa amasistimu wokupholisa umoya nezinhlelo zokufaka umoya omncane ukudala indawo ehlanzekile neyomile ngaphakathi kwezindlu.
Gwema ukuvezwa ukukhanya kwelanga nemvula
Kwezinye izindlu, ukukhanya kwelanga noma imvula kungangena endaweni yasendaweni yegumbi ngqo kusuka ngamafasitela, okuzothinta impilo yephansi le-bamboo.
Ukukhanya kwelanga okunamandla kuzosheshisa ukuguga kwepende kanye ne-glue, futhi kubangele ukuthi phansi kufinyeleleke futhi kuqhekeke. Ngemuva kokuba imvula imanzi, khumbula ukuyisula ngesikhathi, ngaphandle kwalokho i-bamboo izobangela ukwanda nokuwohloka ngemuva kokuthola umswakama, futhi izokwenza nokuthi phansi kubumbeke. Ngakho-ke unake ngokukhethekile ukusetshenziswa kwansuku zonke.
Ngokungafani ne-laminate flooring, i-bamboo flooring ayinayoendlalelo yokuyivikela. Ngakho-ke, indawo ehlanganisiwe njengobubanzi bokuhlobisa bophahla lwe-bamboo luyingqimba evikela phansi.
Okwengaphezulu we-bamboo floor, kufanele kugweme umthelela wezinto ezilukhuni, imihuzuko yezinto ezibukhali, izingxabano zensimbi, njll. Amakhemikhali awakwazi ukugcinwa ngaphakathi endlini. Ngaphezu kwalokho, ifenisha yangaphakathi kufanele isingathwe ngokunakekelwa lapho ihamba, futhi izinyawo zefenisha kufanele zishiswe ngenjoloba.
Ungayithuthukisa kanjani imvelo yasekhaya:
Ukusetshenziswa kwamalahle we-bamboo kungathuthukisa imvelo ephelele yamakamelo angaphakathi, kulawule umswakama ongaphakathi endlini, futhi kudedele ama-ion oksijini angalungile.
Ungayigcina kanjani i-bamboo nokhuni phansi Okuqukethwe okuhlobene